Vaovao - Fepetra fisorohana sy fifehezana ny valanaretina _ Fahalalana fisorohana valanaretina
Fepetra fisorohana ny valanaretina Coronavirus vaovao
1 、 Ahoana no ahafahan'ny besinimaro miaro tena amin'ny valanaretina pnemonia vaovao?
1. Ahenao kely ny fitsidihana ireo faritra be olona.
2. Atsofohy matetika ao an-trano na any am-piasana ny efitranonao.
3. Manaova sarontava foana rehefa manavy na mikohaka ianao.
4. Sasao matetika ny tananao. Raha manarona ny vavanao sy ny oronao amin'ny tananao ianao dia sasao aloha ny tananao.
5. Aza kosehina ny masonao aorian'ny fitsikiana, alao fiarovana sy fahadiovana manokana.
6. Mandritra izany fotoana izany, ny besinimaro dia tsy mila solomaso mandritra ny fotoana fohy, fa afaka miaro tena amin'ny sarontava.
Tandremo ary miarova
Ity virus ity dia tantara an-tsary Coronavirus izay mbola tsy nisy mihitsy teo aloha. Ny fanjakana dia nanasokajy ity aretina Coronavirus ity ho toy ny areti-mifindra kilasy b, ary nandray ny fepetra fisorohana sy fifehezana ny areti-mifindra kilasy. Amin'izao fotoana izao, maro ny faritany valiny amin'ny ambaratonga voalohany manoloana ny vonjy taitra lehibe eo amin'ny fahasalamam-bahoaka. Manantena aho fa handinika azy io ny besinimaro ary hanao asa tsara amin'ny fiarovana azy.
3. Ahoana ny fomba fanaovana dia lavitra?
Ampirisihina hamafa ny atin'ny vavahady sy ny vavahady ofisialin'ny fiara ofisialy indray mandeha isan'andro amin'ny alikaola 75%. Tsy maintsy misaron-tava ny bus. Soso-kevitra ny hamafana ny fitantanan-varavarana sy ny vavahady amin'ny alikaola 75% aorian'ny fampiasana azy.
4. Anaovy tsara ny saron-tava
Sarontava fandidiana: Afaka manakana hatramin'ny 70% ny bakteria. Raha mandeha any amin'ny toerana be olona ianao nefa tsy mifanerasera amin'ny marary dia saron-tava fandidiana no sarontava. Sarontava miaro ny fitsaboana (saron-tava N95): afaka manakana 95% ny bakteria, raha hifandray amin'ilay marary ianao dia tokony hisafidy an'ity.
Ny fandrindrana mialoha ny fisorohana ny valanaretina, ny fiarovana ny famokarana dia azon'ny rehetra tsara. Amin'ny fotoanan'ny ady, aza malemy paika; amin'ny fotoan'ny fisorohana sy fanaraha-maso faobe dia manaova asa tsara. vita ny fiarovana, ho tsara kokoa ny weichuang rahampitso !!!
Fotoana fandefasana: Jun-05-2020